होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्या’न पनि जान सक्छ…. – ईमेची डटकम
होसियार भुलेर पनि सेवन नगर्नुस यी ५ ब्यक्तिले लसुन नत्र ज्या’न पनि जान सक्छ….
लसुनले हाम्रो खानालाई मीठो बनाउन मात्रै होइन, यसमा पाइने धेरै किसिमका पौष्टिक तत्वहरूले हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाइराख्न पनि धेरै मद्दत गर्दछ। लसुनको नियमित सेवनले स्वास्थ्यमा सुधार आउनेमात्रै होइन, केही खतरनाक शारीरिक समस्या र रोगहरूबाट पनि बचाउन सक्दछ।
तर, यदि तपाईँ निम्न ५ किसिमका मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ भने, लसुनजस्तो स्वस्थवर्दक कुरा खाँदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।